अनिल यादवजेष्ठ ६, २०७७
फिल्म प्रवेशका हिसाबले राजेश हमालभन्दा भुवन केसी र शिव श्रेष्ठ एक दशक सिनियर हुन् तर राजेशको प्रवेशपछि उनीहरू फिल्म बजारमा समकालीन प्रतिस्पर्धीजस्तै देखिए । उनीहरूबीच कसको फिल्म हिट हुने र को ठूलो स्टार भन्ने होड पनि देखियो ।
अनिल यादवजेष्ठ ४, २०७७
नेपाली सिनेमाको विकास र यसका प्रवृत्तिका कुरा गर्दा यही परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । जसरी कुनै खोलाबारे एक अन्जुली पानी हेरेर भन्न सकिँदैन, त्यसरी नै फिल्मको विकास र बहावबारे पनि एक–दुइटा फिल्म हेरेर भन्न सकिँदैन । यसका लागि आवश्यक पर्छ, समग्र अध्ययन र गहिरो अनुसन्धान । जो एउटा लेखमा संभव छैन ।
यज्ञशजेष्ठ २, २०७७
कला अनुरागीजेष्ठ २, २०७७
जनक तिमिल्सिनावैशाख ३०, २०७७
जनक तिमिल्सिनावैशाख २८, २०७७
कोभिड–१९ को संकटबाट बाहिर आएर हल सुचारु भइसकेपछि हलमा कस्तो सिनेमा प्रदर्शन गर्दा ठीक होला ? कोरोनापछि दर्शकको मनोविज्ञान कस्तो होला ? उनीहरू कस्तो सिनेमा हेर्न खोज्लान् ? सिनेमाकर्मी अहिले यसको जवाफ खोजिरहेका छन् ।
आफू बलियो र मन बलियो पारेमा रोग जित्न सकिन्छ
दक्षिण पूर्वी लन्डन, प्लमस्टिडका व्यवसायी हुन्– पदम (कपुर) राणा । बेलायतमा महामारीको त्रास भर्खर सुरु हुँदै गर्दा उनलाई सामान्य ज्वरो र निरन्तर सुक्खा खोकी देखियो । एक सातासम्म औषधि खाँदा पनि निको भएन । त्यसपछि एम्बुलेन्सलाई खबर गरे । केहीबेरमै स्वास्थ्यकर्मीसहितको एम्बुलेन्स घरमै आइपुग्यो ।
कृष्ण आचार्यवैशाख १५, २०७७
कोरोनाको खोप वा उपचार नभएकाले त्रासको वातावरण बनेको हो त्यसैले आफ्नो हेरचाह गर्नु र आवश्यकताबिना घरबाहिर ननिस्किनु नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपचार हो । भाइरस लाग्दैमा केही नहुने तर लाग्न नदिनका लागि सरकारले सुझाएका उपाय र स्वयंले आफ्नो ख्याल राख्नु नै उत्तम उपाय हो ।
जनक तिमिल्सिनावैशाख १३, २०७७
जनक तिमिल्सिनार प्रकाश बराल (बाग्लुङ)वैशाख ५, २०७७